Medical ekurapa mapedhi ane anti-leakage uye mamwe mabasa; ivo vanopihwa nenzira isina kuchena yekushandisa-kamwe-nguva. Chigadzirwa chakakodzerwa nezvivakwa zvekurapa nenzvimbo dzekumusha dzehutano Inzvimbo yekurapa yekurapa ine zvinotevera hunhu: 1. Yakagadzirwa isina-chepfu polypropylene composite isina-yakarukwa machira; 2. Ethylene oxide sterilization, yakachena uye nehutsanana. Mapepa ekurapa ekurapa anonyanya kushandiswa muzvivakwa zvekurapa uye mudzimba. Maitiro akakosha ekushandisa ndeaya: 1. Tora mukoti wekurapa ...
Masiki ekuvhiya ekurapa ane diki yekufema mweya yekudzivirira, synthetic ropa chipingamupinyi, kusefa kwechero chinhu uye mabhakitiriya, murazvo unodzora uye mamwe maitiro; yakapihwa fomu chena. mweya wekudzivirira kuramba pasi pe49 Pa, hutachiona hwekuchenesa kugona kupfuura 95. Chigadzirwa chakakodzera kuchengetedzwa kwekutanga kwevashandi vezvekurapa kana vashandi vane hukama, pamwe nekudzivirirwa kubva pakupararira kwezvirwere, zvidiki-zvipuka, ropa, mvura yemumuviri uye spatter. panguva yechisimba op ...
Masiki ekurapa anowanikwa mune aseptic fomu ine diki yekufema mweya yekudzivirira, synthetic ropa chipingamupinyi, yakatarwa simba, kusefa kwekusefa, pamusoro pehunyoro kusagadzikana uye murazvo kudzora. Kuyerera kwemhepo kushoma kuri pasi pe110 Pa, kusefa kwekutsvaira kwemafuta asiri emafuta kwakakura kupfuura 95, hutachiona hwekuchenesa hunyoro hunopfuura 95. Ichi chigadzirwa chakakodzera kuzvitsveta uye kusefa kwechinhu chemudenga mumhepo, ichivhara madonhwe, ropa, mvura yemuviri, zvakavanzika, nezvimwewo Iyo pro ...
Kushandiswa kwakaraswa kwemasikisi ekurapa asina kurukwa ane madiki mafambiro ekudzivirira mweya, nemumuromo uye nemumhino kuburitsa kana kuburitsa zvinosvibisa uye mamwe mabasa ekufambisa. inopihwa aseptic fomu. kufema kwemweya kushomeka isingasviki 49 Pa, hutachiona hwekuchenesa kugona kupfuura 95. Ichi chigadzirwa chakakodzerwa nekupfeka nevashandi vekurapa vekiriniki kana vashandi vane hukama munzvimbo zhinji dzekurapa. Chigadzirwa chinogona kushandiswa muzvipatara, marabhoritari, maamburenzi, dzimba nezvimwe pl ...
Yako-yega priming firita yekudzivirira mask ine basa rekusefa asiri-oiri zvikamu zvakaita seguruva, utsi, mhute uye microorganisms; inopihwa mune isina-chena fomu. Iyo yekushomeka kwemweya kushoma iri pasi pe110Pa, iko kusefa kwekuchenesa kweasina-oiri zvikamu zvinopfuura 95%, uye kugona kwekutsvaira kwebhakitiriya kunopfuura 95%. Ichi chigadzirwa chakakodzera kuzvidzora-kwekutanga kusefa kusefa kweasina-oiri zvikamu zvakaita seguruva, acid mhute, pendi mhute, microorganisms uye zvichingodaro mumhepo ....
Iodophor mushonga unouraya utachiona
Iyo iodophor disinfectant inokwanisa kuparadza protoplasmic protein yebhakitiriya, uye ine mabasa akasimba sekuuraya mabhakitiriya, kuuraya mafuru uye kuuraya mhodzi. Ichi chigadzirwa chinogona kushandiswa kuuraya hutachiona ganda uye mucous membranes, uye zvakare chinogona kurapa kutsva, trichomonas vaginitis, fungal vaginitis, ganda chando hutachiona, nezvimwewo Ichi chigadzirwa chinogona kushandiswa muzvipatara, mudzimba uye dzimwe nzvimbo. 0.4-0.6% g / ml 500 ml iodophor disinfectant 60 mliodophor disinfectant Iodophor disinfectant ini ...
Iyo gauze bhandeji ine mabasa ekupinza mvura, kugadzirisa uye kuputira, nezvimwewo Iyo inopihwa mune isina-chena fomu uye inoraswa. Ichi chigadzirwa chinokodzera kupfeka ronda kana makumbo kupa simba rinosunga, nezvimwewo, kuti utore chikamu mukusunga mabhandeji nekugadzirisa. Ichi chigadzirwa chakakodzera kushandiswa muzvipatara, mudzimba uye dzimwe nzvimbo. Iyo gauze bhandeji inoumbwa neyakafema donje gauze, iyo inogadzirwa neyekurapa inopinza gauze inosangana nezvinodiwa zveYY0331-2006 kupa ...
Kushandiswa kwakaraswa kwekurapa kune basa rekudzivirira ganda guruva kubva pakuzadza kubva mumusoro, kudzivirira guruva rekunze kupinda mukati mevhudzi rebvudzi, zvichingodaro. Chigadzirwa chacho chakakodzera kurapwa, utsanana hwekudya, zvemagetsi, imba yakachena, machira uye mamwe maindasitiri. Inoraswa maporesi ekurapa Anoraswa chivharo chekurapa kumusoro Imwe-nguva kushandiswa kwechiremba makapeti gumi mapakeji Anoraswa machipisi ekurapa ane zvinotevera hunhu: 1. yakaitwa isina-yakarukwa isina-chepfu polypropylene machira uye kaviri-ku ...
Iyo mishonga inouraya utachiona ine basa rekuuraya hutumbu hwepathogenic mabhakitiriya uye suppurative cocci, inactivating virus nezvimwewo. Ichi chigadzirwa chakakodzera disinfection yechinhu chepamusoro pevhu, chena zvipfeko, zvipatara zvakashatiswa zvinyorwa. 500 g 84 inouraya utachiona kumberi 500 g 84 disinfectant reverse 84 Mushonga wekuuraya utachiona une hunhu hunotevera: 1. fomura itsva isina phosphorus kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye hutano; 2. haigone chete kutapudza, asiwo yakachena uye yakasviba. 84 ...
Noodle tip yezvekurapa donje swab ine basa rekutora mvura; inopihwa mune isiri-chena fomu yekushandisa-kamwe-nguva. Ichi chigadzirwa chakakodzera kune zvekurapa uye zvehutano zvikamu uye kutarisirwa kumba, kana uchichenesa uye kuisa utachiona ganda uye maronda, unoshandiswa kuisa mushonga. Kurapa donje swabs Kurapa donje swabs 25 mapakeji Kurapa donje swabs 2000 mapakeji Kurapa donje swabs vane zvinotevera hunhu: 1. Musoro wekotoni wezvekurapa donje swab wakagadzirwa wekurapa ab ...
Mabhora ekotoni anopinza ane kunwa mvura uye mamwe mabasa. ivo vanopihwa mune isina-chena fomu yekushandisa-kamwe-nguva. Ichi chigadzirwa chakakodzera kune zvekurapa uye zvehutano zvikamu uye kutarisirwa kumba, kana uchichenesa uye kuisa utachiona ganda uye maronda, unoshandiswa kuisa mushonga. Yekupinza yekotoni bhora 50g pasuru yeanobata donje mabhora Anobata donje mabhora ane zvinotevera hunhu: 1. Iyo inopinza yekotoni bhora inogadzirwa neyekurapa inopinza donje inoenderana neYY / T 0330 standard, iyo ...
Sterilized Cotton Swab, Inoraswa Medical Chiso Mask, Chiremba Cotton, Antiviral Mask, Mhepo Inofema, Nursing Pad,